IPodcast 9 × 04: I-iPhone X iyigqithile i-iPhone 8 | IPhone iindaba
Kule veki kunye nepodcast yethu sihlalutya i-iPhone 8 kunye ne-8 Plus, ii-smartphones ezintsha ze-Apple ezithi ngaphandle kokuba zilinyathelo elingezantsi kwe-iPhone X zifumana uphononongo oluhle kakhulu, ziye zalinganiswa njengeefowuni ezinekhamera egqwesileyo kwintengiso. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi abasebenzisi balinde i-iPhone X esinamathandabuzo amaninzi malunga nokuba istokhwe sokuqala siyakuba yintoni kwaye singazifumana nini iiyunithi zokuqala. Konke oku nokunye okuninzi kule veki kwipodcast yethu.
Ukongeza kwiindaba kunye noluvo malunga neendaba zeveki, Siza kuphendula nemibuzo evela kubaphulaphuli. Siza kuba ne-hashtag #podcastapple esebenzayo kuyo yonke iveki ku-Twitter ukuze usibuze ukuba ufuna ntoni, wenze iingcebiso okanye nantoni na ethi qatha engqondweni. Amathandabuzo, izifundo, uluvo kunye nokuphononongwa kwezicelo, nantoni na inendawo kweli candelo eya kuthi ihlale kwinxalenye yokugqibela yepodcast yethu kwaye sifuna ukuba usincede senze veki nganye.
Njengakwamanye amaxesha onyaka, kulo nyaka i-Actualidad iPhone podcast inokulandelwa ngqo kuyo itshaneli yethu yeYouTube kwaye uthathe inxaxheba kuyo ngengxoxo neqela lePodcast kunye nabanye ababukeli. Bhalisa kwisitishi sethu ukuze ufumane izaziso xa ziqala ukurekhodwa bukhoma kwePodcast, kunye naxa sidibanisa ezinye iividiyo esizipapasha kuyo. Ewe iya kuhlala ifumaneka kwi iTunes ke unokuyiphulaphula nanini na xa ufuna ukusebenzisa usetyenziso oluthandayo lwePodcast. Sicebisa ukuba ubhalise kwi-iTunes ukuze iziqendu zikhuphe ngokuzenzekelayo xa zikhona. Ngaba uyafuna ukuyiva apha? Kulungile nje ngezantsi ukuba umdlali uyayenza. Sikwanoluhlu lokudlalwayo kwiApple Music ngomculo ovakalayo kwiPodcast.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 9 × 04: I-iPhone X iyigqithile i-iPhone 8
IMicrosoft yazisa ngenguqulelo ye-LTE ye-Surface Pro ngoDisemba
Ingxaki ye-Outlook kunye neMicrosoft Exchange kwi-imeyile ye-iOS ilungisiwe